Oromiyaa walaboomtu moo Federeeshinii Dhugaa -
5 thoughts on “Oromiyaa walaboomtu moo Federeeshinii Dhugaa”
“Oromiyaa walaboomte arguun hawwii Oromoota harka caalanii” ta’u jala muru keetif galatoomi, garuu qabsoon Oromiyaa walaboomsuuf godhamuu qabsoo Federalisimif godhamu irra qaali (more expensive) jette natti fakaata. Ethiopia demokrateessuu yaaluun har’a injalqabamne. Beektooti Oromoo wagga shantama duras itti turani. General Tadasa Biruufan kanan jalqaban, Hailee Fida faa yaada kana dhiiba turan. Lubbu Oromota qaqqalii meeqa itti waregamee. Waan yaalamee dadhabamee darbee irra deebisanii yaaluun lubbu Oromoo biroo/gatiii cima itti baasuun warra seena irraa barachuu indandeenyee fii warra irraa deddbisanii yaalaniif itti bainsa (result) biroo abdatuu nama fakeessa.
B. Hundee says:
Dura yaada keetiif galatoomi. Yaaliin hin milkaa’in godhamaa akka ture waanuma beekamuu dha. Wanti ani barreeffama kana keessatti tuquu yaale garuu, Itoophiyaa diimookraatofte keessatti gaafiin uummattootaa deebii argachuu ni danda’a jedhanii warri yaadan akka jiranii ibsuuf malee, karaan kun filannoo gaarii (preferred option) dha jechuu kiyyaa miti. Haa ta’u malee, ammas taanan walabummaa argachuuf qabsoon godhamu baay’ee ulfaataa fi wareegama guddaa akka gaafatu waan dhara ta’u natti hin fakkaatu. Ijoon dubbii kiyyaa isa kana.
Wanti tokko kan hubachuu qabnu, Federeeshiniin Dhugaa badaa miti yoo jennu, sababa qabna. Innis har’a kan nuuf ni ta’a jennu akka HAAL-DUREEtti qabannee; isa kana malee hin ta’u jennee mormuu dandeenya. Sadarkaan dammaqinsa uummata keenyaa fi guddinni qabsoo keenyaa har’a ol aanaa waan ta’aniif, kan beektotni keenya waggoota 50 dura yaalanii osoo hin milkaayin hafe sun har’a bu’aa tokko fiduu ni danda’a jedheen yaada. Federeeshiniin Dhugaa jalabultii Walabummaa ta’uu danda’aa bar!!! Tooftaa danda’amu hundatti fayyadamuun barbaachisaa dha. “KAN GARAA GARAATU BEEKAA, NATTI RAGADII MORMAAN” jedha Oromoo.
Ethiopia demokratessuun indandamu/wareegama qaalii gaafata jechan jira. Premises ati irraa kaate, Oromiyaa walaboomsuu irra ethiopia demokratessutu salphata (less expensive) waan jedhu irratti. Ani immoo Oromiyaa walaboomsuuf qabasa’utu irraa laafaa (less expensive) dhan jedha. Afaan bioolessa afaan kam ta’u qaba kan jedhuu qabsoo Oromiyaa bilisoomsuuf godhamuu keessatti falma inqabu, afaan Oromooti. Federeshin ethiopia keessatti falma kana irratti yeroo dhumu tilmaamu isinumafan dhiisa. Kun fakeenya tokkitti dha.
Ilaalchi kun ilaalcha ‘Ethiopianists’ dha. Yaada kufaa, dulloomaa fi dabeessotaa!! Kanneen fedhii wal-rukutaa bolola aangoo, dabeessumaa fi yaada teknookraatummaatiin beekaa if fakkeeysanii!
Obbo Birhanu kan jalqabaa galatoomi.
Ani Gama koption yarumaan matadure at barreeysite bakka imaammata keetii argument dandaye. Barruun kee maraammartoof fakkati.
Mana irra naannawuu dhiiftee balbalumaan odoo seentee Oromiyaa bilisa yo jenne nidhumnaa tanaaf Ethiopia keessattI akka itti jiraannu hatolfannu jechuu nidandeeysa ture.
Ilmaan Oromo guyyaan wareegamaa jiranii. Lola Oromo hinbaasuu ilalle lola Badme irratti Oromo kuma dhibbaa (100000) olitu du’e. Erguma Tigreen burchinsay biyya teenyaa Amhara irraa fute duwwaa nama milyoona caalaatu du’e, kaaniis hidhamee, reebamee, laamshawe. Oromoon milyoonotaan lakkaawaman biyya abbaa isaanii irraa buqqifaman. Lafti Oromo Somalif, Amaraf, Tigreef, Adareef, saboota bicuu hundaaf motummaa naanno jedhamaniif qoodamte.
Lafa Oromo gututti namaa waliin deebifanne jiraachuu yo barbaadne karaan Oromof tolu Republika Oromo kan Gadaa bade deebisu tolchuu duwwaadha.